'Jurassic Park' Reeboks tonga amina fonosana ao amin'ny Can Cryo Barbasol Can - iHorror
Home Cool zavatra hovidiana Reeboks 'Jurassic Park' dia namboarina tao anaty cano Cryo Barbasol
Reeboks 'Jurassic Park' dia namboarina tao anaty cano Cryo Barbasol
by Trey Hilburn III Jolay 19, 2021
by Trey Hilburn III Jolay 19, 2021 2,775 hevitra
Tsy nisy niahiahy ny nihaonan'ny Dr. Lewis Dodgson tamin'i Dennis Nedry, afa-tsy ny Dr. Lewis Dodgson. Na izany aza, isika rehetra dia niahy ny Dodgson tena cool, 007 mitady Barbasol cryo fitehirizan-karena ho an'ny mety ho dino ADN. Mazava ho azy araka ny fantantsika, Nedry dia nanidy ny fanondranana an-tsokosoko an-tsokosoko ireo mpitsentsitra nosy ireo, saingy tsy mampiova ny zava-misy fa nokapohina mandrakizay ireo mpankafy ireo rad cryo ireo, kapoaka Barbasol. Ary, toa mety nokapohina koa i Reebok.
The farany Jurassic Park X Reebok fiaraha-miasa dia milay be. Tena matotra ihany koa izany, raha nanantena aho fa ity promo ity dia ho an'ny famolavolana kiraro tokana izay tena raisinay endrika vitsivitsy miaraka amin'ny lokony sy ny fangany.
Ny zavatra manaitra indrindra amin'ny fiaraha-miasa iray manontolo dia azo antoka fa ny fonosana ho ahy. Ny kiraro Omni Zone II dia tonga anaty fonosana ao anatin'ilay fantsom-pandrefesana super rad, jumbo milanja. Ny tsara indrindra dia toa rakotry ny fotaka izy io, midika izany fa ity fonosana ity dia milaza fa tena nahomby tamin'ny asany an-tsokosoko i Nedry. Mitroka, mitroka.
Ny fanangonana Reebok iray manontolo dia misy kiraro maro, miaraka amina tee-shirt ary akanjo milay tena milay. Reebok dia nandatsaka ireo zava-tsoa rehetra ireo tamin'ny 30 Jolay, tamin'ny 9 maraina CDT. Afaka mandeha eto ianao hijerena ireo volavola mahafinaritra rehetra… sy ilay akanjo… io akanjo mamy sy mamy io.